Ama-movie angama-27 Mayelana ne-Queer Women of Colour Ungasakaza Njengamanje - Ukuzijabulisa
Ama-movie angama-27 Mayelana ne-Queer Women of Colour Ungasakaza Njengamanje
Futhi sisho khona manje.
Iqoqo le-Netflix / Courtesy Everett
Uma ungowesifazane we-queer ombala, kulula ukujwayela angikaze ukubona noma ngubani onjengawe esikrinini. Noma ngabe uhlobo lwakho oluthandayo luyidrama yomlando noma ukwethuka, amathuba okuthi uzobona umlingiswa we-queer ngokucacile mancane. Namathuba okuthi umlingiswa azoba ngowesifazane onemibala? Khohlwa ngakho. Ngokujabulisayo, amapulatifomu okusakaza enza kube lula kunanini ngaphambili ukuthola abenzi bamafilimu abaningi yenza dala izindaba ezimayelana nabesifazane abanemibala emangazayo — ngoba yebo, labo abenzi bamafilimu bakhona. (Sine yesikhulumi sethu sokusakaza manje !)
Siqoqe ama-movie angama-27 afaka abesifazane besifazane abanemibala eseyatholakala ukusakazwa kuNetflix, Hulu, Amazon Prime Video, HBO, nakuVimeo. Kukhona okuthile lapha kuwo wonke umuntu, kungakhathalekile uhlobo lwakho lwe-fave noma ukuthi ukhomba kanjani.
UKim Wong-Shing ungumbhali nomhleli wase-New Orleans onama-bylines ku-Bitch Media, Autostraddle, Bustle, nokuningi. Vakashela iwebhusayithi yakhe, zombangkhaingng .
Ukukhishwa Kwesikhombisa Kwezobuciko / I-Everett Collection 1/27
Le dokhumentari ebhalwe phansi ingukubuka okusobala kokuhlangenwe nakho kwabantu besilisa nabesilisa abamnyama abethula abesilisa abathandana nabesilisa abesilisa nabesifazane, abaziwa nangokuthi ama-AG noma abahlukumezi, eNew York City ngasekupheleni kweminyaka yama-90s nasekuqaleni kuka-00s. Iqondiswe ngu-Eric Daniel Peddle, le vidiyo yaqoshwa phakathi neminyaka emihlanu.
UKeith Leman 2/27
IMississippi Ilahlekile (2009)
Le filimu yayisuselwa kumqondisi kanye nomlobi impilo kaTina Mabry ekukhuleni kwakhe njengongungqingili wabantu abaMnyama eTupelo, eMississippi, ngawo-1980. Kuyo uLeigh (Chasity Kershall Hammitte), udadewabo Kari (Tessa Thompson), kanye nomzala uSammy (Malcolm Goodwin) balwa nemijikelezo yeminyaka eminingi yokuhlukunyezwa nokuluthwa.
Ababambiqhaza beMedia / Courtesy Everett Collection 3/27
Le filimu evela kumqondisi-umbhali uMaryam Kesharvarz iqala njengezothando phakathi kwamantombazane amabili ase-Iranian, u-Atafeh (Nikohl Boosheri) noShireen (Sarah Kazemy), futhi iba yingxoxo ebanzi yezocansi kanye namasiko entsha e-Iran yanamuhla. Njengamanje inayo isilinganiso esingu-86% ku-aggregator Utamatisi Obolile.
UCynthia edorh 4/27
Uthando Olunzima (2010)
Abaqondisi uZanele Muholi noPeter Golsmid bangenisa ababukeli ngokuhlola izimpilo zangempela kanye nokuhlangenwe nakho komphakathi waseNingizimu Afrika wezintandokazi zabesifazane abathandana nobulili obufanayo. Idokhumentari igxile kuMuholi uqobo, umthwebuli wezithombe nesishoshovu esibukwayo. Njengo-Autostraddle kusho ekubuyekezweni kwayo , Noma ngubani onentshisekelo ekuhlukaneni kwemigwaqo, i-anticolonialism, kanye nokuhayiza nje njalo kwehhoko lezinkambiso ezijwayelekile, lokhu kwenzelwe wena.
Iyatholakala ukusakaza ku-IMDB
Regent Entertainment / Courtesy Everett Collection 5/27
Ingane Yezinhlanzi (2009)
Le drama yothando yase-Argentina imayelana noLala (Inés Efron), intombazane enemali ethandana nentombi yomndeni wakhe, u-Ailin (Mariela Vitale). Amantombazane amabili alangazelela ukuba ndawonye, ​​futhi aya ebudaleni obukhula ngokwedlulele ngisho nobugebengu ukuze akwenze kwenzeke.
Iqoqo le-Everett / Iqoqo le-Everett 6/27
Kulesi se-indie lesbian drama, u-Andi (Constance Wu) noLu (Angela Trimbur) babungaza umshado wabo ozayo ngempelasonto ye-bachelorette yama-gay egcwele utshwala, ama-jinks aphezulu, futhi (futhi) nemizwa eminingi. Imikhosi ithatha ithuba lapho umuntu embulela iqembu ukuthi akakaze abone i-orgasm.
Iqoqo le-Everett / Iqoqo le-Everett 7/27
Izinhliziyo Zishaya Kuzwakale (2018)
Ubani owayazi ukuthi umdlalo ohlekisayo omayelana nobaba (uNick Offerman) nendodakazi (uKiersey Clemons) abasondelana ngomculo nawo ungaqukatha ezinye zezigcawu ezisencane kakhulu nezithandekayo zalapho? Imvamisa, sibona ama-movie lapho ukungqubuzana kungubungqingili, futhi ngijabule ngempela ukuthi ekugcineni kukhona ibhayisikobho lapho kungeyona ingxabano empilweni yalo muntu, uClemons utshele Indiewire mayelana nefilimu. Yize kunjalo kwabanye, kunabantu emhlabeni wonke abathukile futhi ukungqubuzana kwabo akubona ubudlelwano babo noma ubulili babo. Kwakukuhle ukusuka kuleyo ndaba yezindaba ejwayelekile.
Iqoqo le-Netflix / Courtesy Everett 8/27
Ingxenye Yalo (2020)
Ihlaya le-Netflix elizayo Ingxenye Yalo kuyinto yanamuhla, queer thatha zakudala UCyrano de Bergerac inganekwane. Kulandela u-Ellie Chu (uLeah Lewis), u-Aster Flores (u-Alexxis Lemire), noPaul Munsky (uDaniel Diemer) othandweni oluthandekayo (nobungane) olunxantathu ozofuna ukulibuka kaninginingi.
Izici Zokugxila / Iqoqo Elihloniphekile le-Everett 9/27
Umbhali nomqondisi kaDee Rees ifilimu ethinta inhliziyo yabantu abasha ehlanganisa u-Alike (Adepero Oduye) oneminyaka engu-17 ubudala, ongungqingili wesilisa omnyama kodwa oqala ukubambana nobunikazi bakhe, kusukela ekukhulumeni kwakhe ngokobulili kuya kokuhlangenwe nakho kwakhe kokuqala kobulili obufanayo. Ithole umklomelo we-Excellence in Cinematography kuSundance Film Festival ngo-2011.
Ngokuzithoba i-Everett Collection 10/27
IMosquita neMari (2013)
Le filimu emnandi, kwesinye isikhathi ekhathaza inhliziyo ezayo ilandela amantombazane amabili aseLatinx eLos Angeles, Yolanda (Fenessa Pineda) noMari (Venecia Troncoso) njengoba ubungani babo bakwamakhelwane buba ngothando olungalindelekile. I-movie ye-semiautobiographical yomuntu siqu yabhalwa futhi yaqondiswa ngu-Aurora Guerrero. Indaba ye IMosquita neMari ubeklanyelwe kakhulu ukuzalwa kwami, utshele Umenzi wefilimu umagazini . Ngenkathi ngifunda isikole samafilimu, nganikezwa umsebenzi wokuthi ‘ngibhale engikwaziyo’ nganoma iyiphi indlela eza ngayo. Ngakho-ke njengowesifazane ohlanyayo ngaqala ukubhala uchungechunge lwezindaba ezimfushane ngala mantombazane amabili akhula ndawonye nokuthi konke abekwenza kubhebhezelwa ukukhangwa okungashiwo.
zakha kahle amehlo ansundu
Iqoqo le-Netflix / Courtesy Everett / Everett 11/27
Le filimu eyethusayo ngokwengqondo akuyona eyenhliziyo encane, njengoba ubudlelwano obusontekile phakathi kwabaculi abahlonishwayo uCharlotte (Allison Williams) noLizzie (Logan Browning) bunokujikajika okuningi kunokuba ubungacabanga. Hlala nale kuze kube sekupheleni, ngoba ngeke ubone isiphetho siyeza.
Ukuhamba Kwefilimu / Iqoqo lika-Everett Collecti / Everett 12/27
Ifilimu enhle, egqamile yaseKenya yoMqondisi uWanuri mayelana namantombazane amabili endlovukazi (uSamantha Mugatsia noSheila Munyiva) abawisana bodwa bathole ukuhlonishwa okukhulu emhlabeni wonke, yize bevinjelwe ezweni lakubo. Bekuyifilimu yokuqala yaseKenya ukukhonjiswa kuCannes Film Festival.
Iqoqo le-Everett / Iqoqo le-Everett 13/27
Isiginesha Hambisa (2017)
I-Pakistani Muslim lesbian Fawzia Mirza cowrote, ekhiqiziwe, nezinkanyezi kulesi sigameko esiseChicago njengoZaynab, ummeli onama-30 okuthandana kwakhe nowesifazane waseMexico waseMelika ogama lakhe lingu-Alma (Sari Sanchez) emphoqa ukuba abhekane nobudlelwano bakhe nomama wakhe osanda kuba ngumfelokazi. Uthatha i-lucha-style wrestling njengendlela yokubhekana nakho.
I-Sony Pictures / Courtesy Everett Collection 14/27
Ilondoloza Ubuso (2005)
Eminyakeni eyishumi nanhlanu ngaphambi kokuqondiswa komqondisi wezithandani waseTaiwan waseMelika u-Alice Wu Ingxenye Yalo (nakulolu hlu), wenza i-debut yakhe yokuqondisa nge Ilondoloza Ubuso. Ifilimu yango-2005 ilandela udokotela ohlinzayo uWilhelmina Pang (uMichelle Krusiec) njengoba elinganisa ubulili bakhe nomuzwa wakhe wokuzibophezela emndenini wakhe.
Iqoqo elisha le-Line Line / Courtesy Everett 15/27
Kusethe (ishumi nesishiyagalolunye namashumi ayisishiyagalolunye nesithupha)
UQueen Latifah kungenzeka angabi ngungqingili, kepha uyisithonjana esiqinisekisiwe ezweni labansundu abansundu ngenxa yendima ayidlalayo njengoCleo Simms, intshontsho lebhizinisi labesifazane abathandana nabansundu abamnyama, kuleli bhayisikobho ye-heist edlala nezinkanyezi uJada Pinkett Smith noVivica A. Fox.
Iyatholakala ukusakazwa ku INetflix
Ngokuzithoba i-Everett Collection 16/27
Kuvinjelwe eNdiya kepha yakhululwa e-United States, le filimu ilandisa ngendaba yezwekazi lenkolo, ubunikazi nothando. Lokhu kulandela isithandani esiseduze eNdiya (u-Preeti Gupta) ophikisana nomshado ohleliwe, kuyilapho umuntu ongumSulumane osesidlangalaleni eNew York City ethumba isifundiswa esinenkululeko samaSulumane.
Izici Zokuqalisa Zokuqala / Iqoqo le-Everett Ehloniphekile 17/27
Umfazi Wamakhabe (1997)
Ifilimu yomqondisi nomlobi uCheryl Dunye's groundbreaking arthouse ibuya kulo nyaka. UDunye ulingisa njengoCheryl, osemusha osemncane onobungqingili osebenza njengomabhalane esitolo samavidiyo futhi wenza idokhumentari ngoFae Richards, umlingisi wezintombi eziMnyama owehliswa endimeni yamamama ngeminyaka yo-1930.
UQueen Latifah udlala kule biopic ehlonishwa kakhulu ngomculi ocula abesilisa nabesifazane uBessie Smith, oqondiswe futhi wabhalwa ngumenzi wamafilimu abathandana nabesifazane abansundu uDee Rees. Le filimu ilandela ubudlelwano besiyaluyalu bukaSmith, ukulwa nobandlululo, nokuguquka abe yi-Empress of the Blues. Ithole imiklomelo emine ye-Emmy, kufaka phakathi i-movie evelele yethelevishini.
Ngokuzithoba kwePeccadillo Pictures 19/27
Impilo ka-Stud (2012)
Umdwebo ongokoqobo ongajwayelekile wabantu abansundu abasesitikini, le filimu yaseLondon igxile kumthwebuli wezithombe zomshado uJJ (T'Nia Miller). Ubungani bukaJJ nomfana wakhe oyisitabane uBFF, uSeb (Kyle Treslove), buhlolwa ngemuva kokuwela kowesifazane oyindida ogama lakhe lingu-Elle (Robyn Kerr) kule ndaba emnandi yempilo.
Iyatholakala ukusakaza ku-Vimeo
Ngokuzithoba uMary Guzman Productions 20/27
UDesi Ufuna Intombazane Entsha (2000)
Ngaphambi kwesikhathi sayo, lezi zihlabani zamahlaya ezithandana nabesifazane u-Desi del Valle njengo-Desi, ongungqingili waseLatina onama-20 ozama ukubuyisela impilo yakhe esimweni ngemuva kokuba intombi yakhe imlahle ngentokazi encane. Abangane bakhe bamsethela ngezinsuku ezahlukahlukene ezingaboni, ngakunye kubi ngokuhlekisayo kunokugcina.
izipikili eziluhlaza okwesibhakabhaka ezinezimbali
Ukuzibulala Kale (2016)
Kulamahlaya amnyama, abashadikazi abathandana nobulili obufanayo uJasmine (Brittani Nichols) noPenn (Lindsay Hicks), abebethandana nje kuphela ngenyanga, bazithola besesimweni esibuhlungu kabi lapho bezithela phezu kwenothi lokuzibulala emcimbini wesidlo sasemini. Ngokuvumelana ne Nksz. umagazini , ifilimu yadalwa ngokuphelele futhi yakhiqizwa ngabesifazane.
Ngokuzithoba kukaCanon Yuri 22/27
Yebo noma cha (2010)
Le rom-com yaseThailand imayelana noPie (Sushar Manaying), umfundi owenza kahle wasekolishi othathwe ngumuntu ahlala naye omusha wesilisa uKim (uSuparnat Jittaleela). Njengoba bobabili bekhula besondela, nakanjani baba nemizwa, futhi zombili izingxabano nokusika kulandela. Le filimu ibidume kakhulu sekuvele kukhona ama-sequels amabili.
Idokhumentari yokubuyisela esimayelana nempilo yasebusuku yomuntu omnyama, le filimu eqondiswe nguLeilah Weinraub imayelana ne-Shakedown Angels, iqembu labesifazane abaMnyama nabadlali be-stud abadale imicimbi yemicu ebhekiswe kwabobulili obufanayo eLos Angeles ekuqaleni kweminyaka yama-2000. Ukudlala bekuvelele, kusho uWeinraub INew Yorker . Ngakho-ke bengizama ukubabamba. Vele ukuthole kahle. Igumbi lalizizwa likhetheke ngokweqile, futhi ngangingakaze ngihlangane nabantu abangcono. Bengifana nje, nakhu kunjalo. Ngihlangana nezinsumansumane.
Kutholakala ukusakazwa ku-shakedown.film/watch
Ngokuzithoba Ukuma Okuzijabulisa 24/27
Le vampire flick ethokozisayo ilandela umlingisi osemusha uLaurel (Nicole Maines) njengoba ebuthwa eqenjini lezimpi zabesifazane besifazane e-LA, kufaka phakathi intombazane emnyama u-Izzy (uZolee Griggs) no-dyke Duke ogcwele (uDianna Hopper). Le filimu isha sha, kepha isivele inayo i- Ama-90% kutamatisi abolile .
Ngokuzithoba kokuziqhenya 25/27
Le filimu emfushane imayelana nokusondelana kwabantu abansundu abansundu, kugxile ebudlelwaneni obujule ngokungalindelekile phakathi kwabesifazane ababili (uFarelle Walker noTrishauna Clarke) njengoba bezulazula ubusuku obubodwa. Kubuye kuqhubeke eba ifilimu yesici , ngakho yabelana ngosizo lwakho kuPatreon ngemuva kokubuka.
I-Jewel’s Catch One (2016)
Ngesikhathi lapho ama-nightclub amaBlack LGBTQ + aphethwe ngabangqingili empeleni engazwakali, le dokhumentari ekhuluma ngoJewel Thais-Williams kanye neklabhu yakhe yasebusuku eyaziwayo yaseLos Angeles iyaphilisa ikakhulukazi. Le vidiyo yaqoshwa phakathi neminyaka eyisithupha futhi inezingxoxo nemidlalo evela kuMaxine Waters, uSandra Bernhard, nokuningi.
Ngokuzithoba kwe-Netflix 27/27
U-Ana noVictoria (2018)
Abaculi baseBrazil u-Ana (Ana Caetano) noVitória (Vitória Falcão) badlala kule filimu okususelwa ekwakhiweni kwama-duo abo. Kule filimu, bakha ukuxhumana okusheshayo ngemuva kokuhlangana ngenhlanhla, okubaholela ekutheni balandele umculo ndawonye futhi baqophe i-albhamu kule comedy yamahlaya yomculo engelula.
malini ukunikela ngokugunda izinwele
phakela ngama-braids ngobuhlalu
izitayela ezahlukene zezinwele zabesifazane